Mpiampanga Ny Tsy Mety Avy Ao Amin’ny Tafika Israeliana Manaporitsaka Resaka Fanafihana Valifaty Ataon’ny Tafika Amin’ny Olon-tsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Aogositra 2014 3:48 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Svenska, Español, English
Miaramila fahiny ary serzà tao amin'ny tafika Israeliana i Eran Efrati, 28 taona no lasa mpiampanga. Nosamborin'ny manampahefana izy ary nalaina am-bavany momba ny fikarohana nataony mikasika ny fampiasàna fitaovam-piadiana tsy manaraka ny lalàna ao Gaza.
Ny Talata 29 Jolay, nilaza tao amin'ny Facebook i Efrati fa naharay vaovao avy aminà loharano ao anatin'ny Hery Fiarovana Israeliana (IDF) manambara izay lazainy ho ny tena antony marina amin'ny vonomoka atao ao Shuja'iyya izay nitranga sivy andro talohan”io, ny 20 Jolay, ka nanondroany fa olon-tsotra no nataon'ny miaramila Israeliana ho lasibatra sy novonoina mba ho sazy tamin'ny nahafatesan'ny miaramila tao anatin'ny andian-dry zareo.
Post by Eran Efrati.
Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia tao amin'ny faritr'i Gaza aho ary nahazo tatitra avy amin'ireo miaramila ao, izay manaporitsaka vaovao ho ahy. Anaty dingan'ny famoahana tantara roa goavana ao anatin'ny gazety Amerikana aho, saingy misy zavatra sasantsasany efa azoko zaraina avy hatrany aminareo dieny izao: nanome vaovao mikasika ny famonoana Palestiniana nataon'ireo mpitily tao amin'ireo tanàna manodidina an'i Shuja'iyya mba ho sazy tamin'ny nahafaty ireo miaramila tao anatin'ny andiny misy azy ireo miaramila ao anatin'ireo andiany roa samihafa ao anatin'ny faritr'i Gaza. Taorian'ny tifitra nahazo ireo fiara mifono vy mpitatitra ny tafika Israeliana, izay nahafaty miaramila fito avy amin'ny Borigady Golani, dia nanao vonomoka tao amin'ny manodidina an'i Shuja'iyya ny tafika Israeliana. Andro iray taorian'ilay vonomoka dia marobe ireo Palestiniana tonga hitady ny havany sy ny ankohonany tany anaty korontam-paharavàna tany. Ao anatin'ny iray amin'ireo lahatsary nakarina ao amin'ny YouTube, Salem Shammaly ilay tovolahy Palestiniana iray teo am-piantsoana ny anaran'ireo havany sady mikaroka any anaty korontan-javatra no voatifitra tampoka teo amin'ny tratrany ary lavo. Segondra vitsy taorian'izay dia mbola nisy tifitra roa fanampiny avy amin'ireo mpitily niantefa teny amin'ny vatany, nahafaty azy teo noho eo. Hatramin'ny nivoahan'ilay lahatsary, tsy nisy valinteny ofisialy avy amin'ny mpitondra tenin'ny IDF (tafika Israeliana) aloha hatreto. Androany dia azoko atao ny mitatitra fa ny baiko ofisialy nalefa ho eny am-pelatanan'ireo miaramila tao Shujaiyya dia ny haka ireo trano Palestiniana hatao ho tobin'ny mpisava làlana. Avy eny amin'ireny toby ireny, namaritra tsipika mena tao an-eritreriny ireo miaramila, ary nanapaka hevitra samirery ny hitifitra ho faty izay rehetra sahy mandingana azy io. Na iza na iza mandingana ilay tsipika dia raisiny daholo ho loza mitatao ho an'ny tobin-dry zareo, ary dia rariny ho azy raha raisiny ho lasibatra. Io no fomba fisainana ofisialy ao anatin'ireo andiany ireo. Nolazaina tamiko fa ny mba hanamaivanan'ireo miaramila ny fikorontanan-tsainy sy ny alahelony tamin'ny namoizany ireo miaramila mpiara-dia taminy (zavatra tsy nosedrain'ny IDF intsony efa an-taona maro nandritry ny hetsika nataony tany amin'ny faritr'i Gaza sy Cisjordanie) no antony iray tsy ofisialy, hamalian-dry zareo izany amin'ireo Palestiniana mpialokaloka tao amin'ny manodidina. Eo ambanin'izay dia mody lazain-dry zareo fa “loza mananontanona ny ain'ireo” miaramila no anatanterahany fanafihana iray efa voaomana mialoha ho valifaty atao amin'ireo olon-tsotra Palestiniana. Manampy isa ireo tantara sasany mitovy aminy izay niarahanay i Amira Hass nanadihady momba ny “Hetsika Firaka Mitsonika” ireny tantara ireny. Efa mihamanakaiky ny isa tamin'ny vonomoka nataony taona 2009 ny isan'ny maty izay tsy mitsahatra ny mitombo.
Ny Hetsika Firaisankina Iraisam-pirenena no namoaka ilay lahatsary ahitàna ilay Palestiniana naratra notifirin'ny mpitily ary afaka jerena eto ambany. [Tandremo: Maherisetra ity lahatsary ity, ilaina ny fahatsiarovantenan'ny mpijery.].
Nofaritan'ny Amnesty International ho mifanahantsahana amin'ny heloka an'ady ilay vonomoka:
Ilaina ny manamarika fa ankoatry ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Anarchists Against the Wall sy ny mpomba ny BDS Boycott from Within, Efrati dia mpikambana ao amin'ny Breaking The Silence (Mamaky Fahanginana), ONG Israeliana ivondronan'ireo miaramila taloha tao amin'ny IDF izay ny tonjony dia “hanaitra ny fahatsiarovantenan'ny olona momba ny zava-misy iainana isanandro any amin'ireo Tany Voabodo.”
Ity ny lahateny iray nataony tao Colorado, ampahany tamin'ilay fihodinana an'i Etazonia nomena anarana hoe The Soldier and the Refusenik (Ilay miaramila sy ny fandàvana fifindrà-monina) niarahany tamin'i Maya Wind volana vitsy lasa izay: